Qoraalka Macluumaadka Fanka Farshaxanka ee Ota Ward "ART bee HIVE" oo ay daabacday Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ota Ward, wariyaha xaafadda "Mitsubachi Corps" ayaa ka warami doona waxqabadyada dhaqanka iyo farshaxanka!Fadlan noo soo dir codsiyo caymis ama macluumaad ku saabsan nashaadaadyada la xiriira dhaqanka iyo farshaxanka, sida dhacdooyinka farshaxanka, howlaha dhiirrigelinta farshaxanka, iyo meelaha farshaxanka.
Waqtiga soo saarista
Arrinta guga: Abriil XNUMX (macluumaadka Abriil-Juunyo)
Arrinta xagaaga: XNUMXda Luulyo (macluumaadka Luulyo-Sebtember)
Arrinta deyrta: Oktoobar 10deeda (macluumaadka Oktoobar-Diseembar)
Arrinta Jiilaal: Janaayo XNUMXth (macluumaadka Janaayo-Maarso)
Wakhtiga kama dambaysta ah ee la codsanayo caymiska iyo bixinta macluumaadka
Arrinta guga: Badhtamaha-Janaayo
Arrin xagaaga: Badhtamaha Abriil
Arrinta deyrta: Bartamaha-Luulyo
Arrinta Jiilaalka: Badhtamaha Oktoobar
Ota Muwaadinka Plaza, Ota Citizen Hall Hallkiisa, Ota Bunkanomori Daaqad kasta
Dhajinta waxaa la go aansan doonaa kadib kulanka tifaftirka.Waxay kuxirantahay nuxurka iyo booska bogga, suuragal ma ahan in la daabaco.
Kuwa laga yaabo inay waxyeeleeyaan dabeecadda guud iyo sharafta ururka
Hawlaha siyaasadeed, kuwa diinta, fikradaha iyo xayeysiinta shaqsiyadeed
Wax kasta oo ka hor imanaya nidaamka dawliga ah iyo dhaqanka suuban
Ganacsiyada ku hoos jira Xeerka Xeerka Ganacsiga Kastamyada, iwm.
Waxyaabaha sharcigu mamnuucay ama ku xadgudbi kara sharciga
Kuwa kale oo loo aqoonsan yahay inay dhibaato gaar ah ku qabaan danta guud
Weydiimo / Soo Gudbin
146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3 Gudaha Ota Citizen's Plaza
Qeybta Xiriirka Dadweynaha iyo Qeybta Dhageysiga Dadweynaha, Qeybta Dhiirrigelinta Dhaqanka iyo Farshaxanka, Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward
Codsiga caymiska iyo bixinta macluumaadka
Waxaan kula soo xiriiri doonaa cinwaanka hoose.
Fadlan deji cinwaanka soo socda si looga soo qaato kombiyuutarkaaga gaarka ah, taleefankaaga gacanta, iwm, geli macluumaadka lagama maarmaanka ah, oo dalbo.
gabi ahaanba dir
※Ma yahay shay loo baahan yahay, markaa fadlan hubi inaad buuxiso.
Tusaale: Taro Daejeon
Tusaale: Ota Taro
(Nambarada nus-nuska ah) (Tusaale) 03-1234-5678
(Xarfaha xarfaha alfarta-nus) Tusaale: sample@ota-bunka.or.jp
Xaqiijinta cinwaanka emaylka※
Xiriirka codsiga / bixinta waxyaabaha※
Aqoonsigaaga Kaqeybgalayaasha kale
Waxqabadka / dhacdooyinka Bandhig waxqabadka 施設 kale
* Magacyada dhacdooyinka, bandhigyada kali, iwm.
Taariikhda iyo waqtiga※
Hoyga ama cinwaanka URL※
Sawirro ama waraaqo, iwm.
Maareynta macluumaadka shaqsiyeed※
Macluumaadka shaqsiyeed ee aad gasho waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya ogeysiisyada ku saabsan Ota Ward Macluumaadka Farshaxanka Dhaqanka "ART BEE HIVE".
Haddii aad ogolaato inaad isticmaasho macluumaadka xiriirka ee aad soo gashay si aad noola soo xiriirto, fadlan xulo [Oggol] una gudub shaashadda xaqiijinta.
Eeg ururka "Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah"
Gudbinta waa la dhameystiray.
Waad ku mahadsantahay inaad nala soo xiriirto.
Ku noqo dusha sare ee ururka